Mica – Sim: “Adidin’ny Malagasy ny manjifa ny vita malagasy” | NewsMada
Mica – Sim: “Adidin’ny Malagasy ny manjifa ny vita malagasy”
Natao, omaly teo Anosy, teo amin’ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana (Mica) sy ny Sendikan’ny indostria eto Madagasikara (Sim) ny fifanarahana ho fanatanterahana ny tetikasa indostria iray isaky ny distrika iray. Tanjona ny hameloma-maso ny vita malagasy.
Ho fampandrosoana ny indostria eto Madagasikara, tetikasa ny fisian’ny indostria isaky ny distrika, araka ny vokatra ao aminy. Koa ny fiaraha-miasa eo amin’ny Mica sy ny Sim hoentina hanatanterahina izany, araka ny traikefa efa ananan’ny sehatra tsy miankina amin’ny fananganana indostria. Laharam-pahamehana ny fanodinam-bokatra. Tafiditra amin’izao fifanarahana izao koa ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana, manampy amin’ny famokarana. Faharoa ao anatin’izao fifanarahana izao ny “Malagasy ny antsika”, filamatry ny indostria malagasy, hanomezana fiofanana ho fanatsarana sy fampitomboana ny vokatra. Fahatelo, fanampiana ny orinasa eto an-toerana.
Avy amin’ireo lamina napetraka ireo, “adidin’ny Malagasy ny manjifa ny vita malagasy”, hoy ny filohan’ny Sim, i Hassim Amiraly. “Ny mpanjifa malagasy, tsy mahafantatra ny vokatra eto an-toerana”, hoy ihany ny filohan’ny Sim. Matetika tokoa, voafitaka amin’ny vokatra sakafo efa lany andro avy any ivelany ny mpanjifa, satria mora. Ny tsara anefa vidian-dafo, na izany aza, miezaka ny hahatsara sy ny hahamora ny vita eto an-toerana ny Sim. Manjifa ny vita malagasy, midika fanohanana ny indostria eto an-toerana sy fanomezana asa ny tanora sy ny mpamboly. Ifanakalozana ny vokatra, izay samy manana ny mampiavaka azy ny isam-paritra.
Nanana ny tantarany ny indsotria
“Nanana ny tantarany ny indsotria, nahitana izany isaky ny distrika, saingy taty aoriana, tsy nirindra ny fitantanana, nitarika fahapotehana. Koa miezaka ny hamerina ny tantara ny Mica amin’ny alalan’ny tetikasa indostria iray na mihoatra isaky ny distrika iray”, hoy ny minisitra, Rakotomalala Lantosoa. Tao Mahajanga fotsiny, ohatra, nisy orinasa mpanao simenitra, Sotema mpanao lamba, Sirama tany Namakia ; tany Toliara, nisy Sumatex mpanao lamba ; tao Antsirabe, Cotona, sy ny maro hafa. Koa tanjona ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina, mba hanana ny tanjany eo amin’ny fifaninanana amin’ny tsenam-paritra i Madagasikara.